Okufakiwe - Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.
Isikhumulo sokusebenza Optical - OptiXstar
Ukunweba ukuxhumana okulula kuwo wonke amakhaya, kuwo wonke amabhizinisi,
Ipaki ngayinye ivumela abantu ukuthi baxhumane kakhulu nemindeni yabo kanye namabhizinisi ukuze basebenze kahle
Yini i-HUANET engakwenzela yona namuhla?
Ingcebo yamamodeli wokugcina
Zonke izinhlobo ze-OLT / ONU / iTransceiver / Shintsha / i-WDM zinganikezwa, ngekhwalithi ephezulu, ngentengo yokuncintisana, kanye nensizakalo ehamba phambili.
I-Professional FTTH, isipiliyoni sesisombululo se-FTTX
I-HUANET ineminyaka engaphezu kwengu-20 yomlando, kunezinsizakalo ezingaphezu kwezingu-10 kuphothifoliyo yayo kanye namakhasimende ayi-10 000 akhonzwe.
Isevisi eyenziwe ngokwezifiso ye-OEM ne-ODM
Isevisi ye-OEM ne-ODM ingahlinzekwa yi-HUANET, ngesipiliyoni namandla adingekayo ukuze kuqinisekiswe izinsizakalo ezisezingeni kanye namakhasimende.
Umkhiqizo ofanele kakhulu
MA5800 Series OLT Optical Line Terminal SmartAX MA5800 MA5800-X2 kusuka kuHuawei
I-MA5800, insiza yokufinyelela yezinsizakalo eziningi, iyi-4K / 8K / VR elungele i-OLT yenkathi yeGigaband. Isebenzisa ukwabiwa okwabiwe futhi isekela i-PON / 10G PON / GE / 10GE kwipulatifomu eyodwa. Izinsizakalo ezihlanganisiwe ze-MA5800 ezidluliswa ngemidiya ehlukile, zinikeza isipiliyoni sevidiyo esingu-4K / 8K / VR, sisebenzisa ukusebenza ngokusezingeni eliphezulu, futhi sisekela ukuvela okuhle okubushelelezi ku-50G PON. Uchungechunge olumiswe ngo-MA5800 luyatholakala kumamodeli amathathu: MA5800-X17, MA5800-X7, ne-MA5800-X2. Zisebenza kumanethiwekhi we-FTTB, FTTC, FTTD, FTTH, ne-D-CCAP. I-1 U enebhokisi elime okwe-OLT MA5801 isebenza kukho konke ukufinyeleleka kokufinyelela ezindaweni ezinabantu abaningi.
I-Huawei yangempela MA5800-X17 OLT
I-MA5800, insiza yokufinyelela yezinsizakalo eziningi, iyi-4K / 8K / VR elungele i-OLT yenkathi yeGigaband. Isebenzisa ukwabiwa okwabiwe futhi isekela i-PON / 10G PON / GE / 10GE kwipulatifomu eyodwa. Izinsizakalo ezihlanganisiwe ze-MA5800 ezidluliswa ngemidiya ehlukile, zinikeza isipiliyoni sevidiyo esingu-4K / 8K / VR, sisebenzisa ukusebenza ngokusezingeni eliphezulu, futhi sisekela ukuvela okuhle okubushelelezi ku-50G PON.
Uchungechunge olumiswe ngo-MA5800 luyatholakala kumamodeli amathathu: MA5800-X17, MA5800-X7, ne-MA5800-X2. Zisebenza kumanethiwekhi we-FTTB, FTTC, FTTD, FTTH, ne-D-CCAP. I-1 U enebhokisi elime okwe-OLT MA5801 isebenza kukho konke ukufinyeleleka kokufinyelela ezindaweni ezinabantu abaningi.
I-MA5800 ingahlangabezana nezimfuno ze-opharetha zenethiwekhi yeGigaband ngokumbozwa okubanzi, i-broadband esheshayo, nokuxhuma okuhlakaniphile. Kuma-opharetha, i-MA5800 inganikeza ngezinsizakalo zevidiyo ezingama-4K / 8K / VR eziphakeme, isekele ukuxhumana okukhulu ngokomzimba kwamakhaya ahlakaniphile kanye namakhampasi anamehlo onke, futhi inikezela ngendlela ehlangene yokuxhuma umsebenzisi wasekhaya, umsebenzisi webhizinisi, i-backhaul yeselula, ne-Intanethi Yezinto ( IoT) izinsizakalo. Ukuthwala insizakalo okuhlanganisiwe kunganciphisa amakamelo emishini yehhovisi emaphakathi (CO), kube lula ukwakhiwa kwenethiwekhi, futhi kunciphise izindleko ze-O & M.
I-Optical Line Terminal Huawei SmartAX 5800 OLT MA5800-X15 GPON
Iqhutshwa ngumkhuba wokuvela kwemvelo we-fiber ukufinyelela, ipulatifomu ye-Huawei yesizukulwane esilandelayo ithuthukiswa ngokubambisana namakhasimende ethu. Uchungechunge lwe-MA5800 lwe-OLT luyisikhulumi sakamuva futhi esisezingeni eliphezulu kakhulu embonini. Idizayinelwe ukuxhasa ukukhula okuqhubekayo kokufunwa kwe-bandwidth, i-wire-line kanye nokuhlangana kokufinyelela okungenantambo, nokufudukela ku-SDN.
Umkhakha wokuqala we-40 Gbit / s-capacity we-Next-Generation Optical Line Terminal wemboni (NG-OLT). I-SmartAX MA5800 ye-SmartAX MA5800 yokungena kwezinsizakalo eziningi isebenzisa ukwakhiwa okusatshalalisiwe ukuxhasa i-ultra-broadband, izinsizakalo ze-Fixed Mobile Convergence (FMC), namakhono ahlakaniphile, njengokubona okusekelwe ku-SDN.
Isethi yezinhlelo ze-Network Processor (NP) ye-MA5800 isheshisa ukukhishwa kwezinsizakalo ezintsha, ezinakekela isidingo sezinsizakalo ezihlukanisiwe, kufaka phakathi ukwahlukaniswa kwabanikezeli bezinsizakalo ezidayisayo nabathengisi abaningi.
I-Huawei SmartAX MA5800-X7 Multi-service Access Series OLTs
I-Stock Lot Original huawei ma5680t gpon olt ama-specs wezobuchwepheshe huawei ma5680 olt
Uchungechunge lwe-SmartAX MA5680T lwenziwa ngokususelwa kupulatifomu ebumbene yesizukulwane sesithathu sikaHuawei futhi ingama-OLTs okuqala wokuhlanganisa emhlabeni. Uchungechunge lwe-MA5680T luhlanganisa imisebenzi yokuhlanganisa kanye nokushintsha, lunikeze amachweba we-high-densityxPON, i-Ethernet P2P, ne-GE / 10GE, futhi inikeze nezinsizakalo zolayini ezizimele ze-TDM ne-Ethernet ngokunemba kwewashi eliphezulu ukusekela insizakalo yokufinyelela ye-Intanethi ebushelelezi, isevisi yevidiyo, insizakalo yezwi , kanye nokufinyelela okuphezulu kwensizakalo. Lolu chungechunge luthuthukisa ukuthembeka kwenethiwekhi, lwehlisa utshalomali ekwakhiweni kwenethiwekhi, futhi lwehlise nezindleko ze-O & M.
Uchungechunge lwe-MA5680T lubandakanya umthamo omkhulu we-SmartAX MA5680T namandla aphakathi nendawo i-SmartAX MA5683T. Izingxenyekazi zekhompuyutha nesoftware yalezi zinhlobo ezimbili ziyahambisana ngokuphelele ukunciphisa izindleko zokulungiswa kwempahla yenethiwekhi. Kulezi zinhlobo ezimbili, i-SmartAX MA5680T inikeza ama-service slots ayi-16 kanti i-SmartAX MA5683T inikeza ama-service slots ayi-6.
8 16 32 PON Ports OLT Mini Optical Line Terminal imishini SmartAX MA5608T
I-MA5608T Mini OLT yakhelwe ukubhekela i-Fibre (noma i-FTTP) noma izimo ezijulile zokuthunyelwa kwe-fiber lapho i-OLT enkulu
I-chassis ingahle ingalingani kahle ngezizathu ezahlukahlukene. IHuawei mini OLT MA5608T yakhelwe ukuba ibe umphelelisi ophelele ku
olunye uchungechunge lwe-MA5600 i-OLTs enkudlwana futhi inikezela ngezici ezifanayo zebanga lenkampani yenethiwekhi nokusebenza.
Idizayini yokufinyeleleka ye-MA5608T yakwenza kube yisixazululo esikahle sokuthunyelwa ezindaweni ezinjengezindlwana ezivalelwe isikhala,
amakhabethe angaphandle noma izindlu zangaphansi zokwakha. Inezinketho zokufaka i-AC ne-DC, ibanga lokushisa elinwetshiwe, futhi inikeza ukufakwa okulula.
Idizayinelwe ukuxhasa ukukhuphuka komkhawulokudonsa okwandayo, i-MA5608T ine-200 Gbps backplane. Inhlanganisela yamandla aphezulu
kanye nokuhlangana kwemigqa ngokusebenza okusemagqabini kuvumela ama-opharetha ukuthi ahambise uhla lwezinsizakalo ngenzuzo ephezulu kakhulu
amaphuzu wezindleko zokuncintisana.
I-MA5608T yabelana ngokwakhiwa komkhiqizo okufanayo ne-MA5600 series OLTs ukuvumela ukukhula kwenethiwekhi okungenamthungo.
IHUNAET ONU HG911A
I-HZW-HG911A (HGU) iyithuluzi lokugcina le-GPON ONT elincane, elisebenza ekufinyeleleni kwe-broadband okumsulwa.Isebenzisa ukwakheka kohlobo lwe-compact mini ngokuhlanganiswa okuphezulu futhi kunganikeza nge-1 GE, RJ45） interface. Isekela ubuchwepheshe besendlalelo se-2 Ethernet switch futhi kulula ukuyigcina nokuyiphatha.Ingasetshenziswa ku-FTTH / FTTP application application for resident and business users.and it is compliely fully to technical technical such as ITU-T G.984.x kanye nemfuneko yezobuchwepheshe ye-GPON Equipment.
I-HZW-HG623-TW (HGU) iyithuluzi lokugcina le-XPON ONT, elenzelwe ukugcwalisa i-FTTx kanye nemfuno yesevisi yokudlala kathathu yomsebenzisi wenethiwekhi ongaguquki. Leli bhokisi lisuselwa kubuchwepheshe beGigabit obuzinzile futhi obuvuthiwe, obunokulinganiswa okuphezulu kokusebenza nentengo, kanye nobuchwepheshe be-Layer 2/3, WDM ne-VoIP esezingeni eliphakeme futhi. Ithembeke kakhulu futhi kulula ukuyigcina, ine-QoS eqinisekisiwe yensiza ehlukile. Ihambisana ngokuphelele nemithethonqubo yobuchwepheshe efana ne-ITU-T G.984.x kanye nemfuneko yezobuchwepheshe ye-XPON Equipment.
I-HG643-W (HGU) iyi-XPON ONT idivayisi yokugcina , okuyi yenzelwe ukufeza i-FTTx kanye nesidingo sesevisi yokudlala kathathu yomsebenzisi wenethiwekhi ongaguquki. Leli bhokisi lisuselwa kuGigabit ezinzile futhi evuthiwe XUbuchwepheshe be-PON, obunokulinganiswa okuphezulu kokusebenza nentengo, nobuchwepheshe be-Layer 2/3, Ithembeke kakhulu futhi kulula ukuyigcina, nge-QoS eqinisekisiwe yensiza ehlukile. Ihambisana ngokuphelele nemithethonqubo yezobuchwepheshe efana ne-ITU-T G.984.x kanye nemfuneko yezobuchwepheshe ye- XIzinsiza ze-PON.
Imbobo ye-GPON WAN ene-1.244Gbps uplink / 2.488Gbps ijubane lokuxhumanisa le-downlink
Imbobo ye-Ethernet WAN esebenzayo ene-1.25Gbps isivinini sokuxhumanisa okuqondise kabili
I-1x GE + 3FE Ethernet RJ45 Izimbobo
I-2 × 2 11n WIFI yesekela isivinini sokuxhumanisa esingu-300Mbps
Amachweba we-1x FXS RJ11 wenkonzo Yezwi
Amachweba we-1x we-USB kumodi yokusingathwa noma yedivayisi
I-adaptha ye-DC 12V, i-max engu-1A yamanje
-5 kuye ku-50 ℃ okushisa kuma okushisa
I-100G CFP2 ER4 i-transceiver ebonakalayo ihlanganisa ukuhambisa nokwamukela indlela kumodyuli eyodwa. Ngasohlangothini lokudlulisa, imizila emine yemifudlana yedatha etholakalayo iyatholwa, ifakwe kabusha, bese idluliselwa kubashayeli be-laser abane, abalawula ama-lasers amane (ama-EMLs) wokumunca ugesi anama-1296, 1300, 1305, kanye no-1309 nm centre wavelengths. Amasiginali we-optical abese ephindaphindwa abe yimicu yemodi eyodwa ngesixhumi se-LC esezingeni lomkhakha Ohlangothini lokwamukela, imizila emine yemifudlana yedatha ye-optical i-DE-multiplexed yi-integratedult demultiplexer. Umusi ngamunye wedatha utholwa yi-PIN photo-detector ne-trans-impedance amplifier, iphinde ibeke isikhathi, bese idluliselwa kumshayeli ophumayo. Le mojula inesixhumi esibonakalayo esishisayo esisebenza ngogesi, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, kanye nesixhumi esibonakalayo sokuphathwa kwe-MDIO.
HUANET I-HUAXDI-xx1XL-CD80 yi-DWDM XFP Transceiver ekhombisa ukuzinza okuhle kakhulu kwe-wavelength, ukusekela ukusebenza esiteshini se-100GHz, imodyuli esebenza kahle. Idizayinelwe izinhlelo zokusebenza ze-10G DWDM SDH, 10GBASE-ZR kanye ne-10G Fiber- Channel. I-transceiver iqukethe izigaba ezimbili: Isigaba sokudlulisa sifaka i-EML laser ebandayo. Futhi isigaba somamukeli siqukethe i-APD photodiode ehlanganiswe ne-TIA. Onke amamojula anelisa izidingo zokuphepha ze-class I laser I-DWDM XFP transceiver inikeza isikhombimsebenzisi sokuqapha esithuthukisiwe, esivumela ukufinyelela kwesikhathi sangempela kumapharamitha wokusebenza wedivayisi njengokushisa kwe-transceiver, i-laser bias yamanje, amandla we-optical adlulisiwe, athola amandla we-optical namandla we-transceiver voltage.
I-10G SFP + CWDM Module Ebonakalayo
HUANET’s I-HUACxx1XL-CDH1 I-CWDM 10Gbps SFP + transceiver yakhelwe ukudlulisa nokwamukela idatha ebonakalayo ngaphezulu kwemodi eyodwa ye-fiber optical ye-link length 100km. Le transceiver iqukethe izigaba ezimbili: Isigaba sokudlulisa sifaka i-CWDM EML laser. Futhi isigaba somamukeli siqukethe i-APD photodiode ehlanganiswe ne-TIA. Onke amamojula anelisa izidingo zokuphepha ze-laser zeklasi I. Imisebenzi yokuxilongwa kwedijithali iyatholakala nge-2-wire serial interface, njengoba kucacisiwe ku-SFF-8472, evumela ukufinyelela kwesikhathi sangempela kumapharamitha wokusebenza wedivayisi njengokushisa kwe-transceiver, i-laser bias yamanje, amandla we-optical adlulisiwe, athola amandla we-optical namandla we-transceiver voltage .
HUAQ100Z yenzelwe izinhlelo zokuxhumana zokukhanya ezingama-80km. Le mojula iqukethe i-4- lane transmitter optical, 4-lane receiver optical kanye ne-module management block kufaka phakathi i-2 wire serial inter- face. Amasiginali we-optical aphindaphindwa kwifayibha yemodi eyodwa ngesixhumi esijwayelekile semboni ye-LC. Umdwebo webhulokhi ukhonjisiwe kuMdwebo 1.
I-10KM 100G QSFP28
I-HUA-QS1H-3110D iyimoduli ebonakalayo ye-100Gb / s Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28). Inikeza ukwanda kobuningi bembobo kanye nokonga izindleko zesistimu ephelele. I-module ye-QSFP28 full-duplex optical inikeza iziteshi ezi-4 ezizimele zokudlulisa nezamukela, ngayinye ikwazi ukusebenza kwe-25Gb / s ngenani lemininingwane elihlanganisiwe le-100Gb / s ku-10km we-fiber mode eyodwa.
I-10KM 100G CFP2
I- I-CFP2 LR4 i-transceiver ebonakalayo ihlanganisa indlela yokudlulisa nokwamukela kumodyuli eyodwa. Ngasohlangothini lokudlulisa, imizila emine yemifudlana yedatha etholakalayo iyatholwa, ifakwe kabusha, bese idluliselwa kubashayeli be-laser abane, abalawula ama-lasers amane (ama-EMLs) wokumunca ugesi anama-1296, 1300, 1305, kanye no-1309 nm centre wavelengths. Amasiginali we-optical abese ephindaphindeka abe yimicu yemodi eyodwa ngesixhumi se-LC esezingeni lomkhakha Ohlangothini lokwamukela, imizila emine yemifudlana yedatha ye-Optical iphazanyiswe kahle yi-demultiplexer ehlanganisiwe. Umusi ngamunye wedatha utholwa yi-PIN photodetector kanye ne-transimpedance amplifier, ibuyiswe kabusha, bese idluliselwa kumshayeli ophumayo. Le mojula inesixhumi esibonakalayo esishisayo esisebenza ngogesi, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, kanye nesixhumi esibonakalayo sokuphathwa kwe-MDIO.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-S6700 (S6700s) kungukushintsha kwebhokisi lesizukulwane esingu-10G. I-S6700 ingasebenza njengokhiye wokungena esikhungweni sedatha ye-Inthanethi (i-IDC) noma inkinobho eyinhloko kunethiwekhi ye-campus. I-S6700 inokusebenza okuhola phambili embonini futhi ihlinzeka ngamachweba angama-24 noma ama-line-speed 10GE ajwayelekile. Ingasetshenziswa esikhungweni sedatha ukuhlinzeka ngokufinyelela kwe-10 Gbit / s kumaseva noma ukusebenza njengokushintsha okuyinhloko kunethiwekhi ye-campus ukuhlinzeka ukuhlanganiswa kwethrafikhi kwe-10 Gbit / s. Ngaphezu kwalokho, i-S6700 inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene, izinqubomgomo eziphelele zokuphepha, nezici ezahlukahlukene ze-QoS ukusiza amakhasimende ukuthi akhe izikhungo zedatha ezilinganisekayo, ezilawulekayo, ezinokwethenjelwa neziphephile. I-S6700 itholakala ngamamodeli amabili: i-S6700-48-EI ne-S6700-24-EI.
Nge-Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN) eyenziwe ngokubona, izinqubomgomo zokuphepha eziphelele, kanye nohlu lwezici ze-Quality of Service (QoS), i-CloudEngine S6730-S isiza amabhizinisi ukuthi akhe amanethiwekhi wesikhungo namathafa esikhala, athembekile, futhi avikelekile.
I-CloudEngine S6730-H Series 10 GE Switches ihambisa i-10 GE downlink ne-100 GE uplink yokuxhunyaniswa kwamakhampasi ebhizinisi, abathwali, izikhungo zemfundo ephakeme, kanye nohulumeni, okuhlanganisa amandla endawo we-Wireless Local Area Network (WLAN) Access Controller (AC), ukuxhasa kuze kufike 1024 WLAN Access Points (APs).
S5730-HI Series Ishintsha
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Huawei S5730-HI kungukushintsha okuhleliwe kwe-IDN yesizukulwane esilandelayo okunikezela ngamachweba wokufinyelela we-gigabit angahleliwe, amachweba we-10 GE uplink, nezikhala zamakhadi ezinwetshiwe zokunwetshwa kwamachweba e-uplink.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-S5730-HI kunikela ngamakhono we-AC womdabu futhi kungaphatha ama-1K APs. Banikezela ngomsebenzi wokuhamba mahhala ukuqinisekisa isipiliyoni somsebenzisi esingaguquguquki futhi i-VXLAN iyakwazi ukusebenzisa i-virtualization yenethiwekhi. Ukushintshwa kochungechunge lwe-S5730-HI futhi kunikela ngezindlela zokuphepha ezakhelwe ngaphakathi futhi kusekela ukutholwa kwezimoto okungajwayelekile, i-Encrypted Communications Analytics (ECA), nenkohliso yenethiwekhi ebanzi. Ukushintshwa kochungechunge lwe-S5730-HI kufanelekile ekuhlanganisweni nasekufinyelelweni kwezingqimba zamanethiwekhi asezingeni eliphakathi nendawo nongqimba oluphambili lwamanethiwekhi egatsha lekampus namanethiwekhi amancane asekampus.
I-Quidway S5300 Series Gigabit Switches
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Quidway S5300 gigabit (ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi ama-S5300s) kungukushintshwa kwesizukulwane esisha se-Ethernet gigabit esakhiwe yiHuawei ukuhlangabezana nezidingo zokufinyelela okuphezulu komkhawulokudonsa kanye nokuhlangana kwezinsizakalo eziningi ze-Ethernet, okunikeza imisebenzi enamandla ye-Ethernet yezinkampani ezithwala namakhasimende ebhizinisi. Ngokuya nge-hardware yesizukulwane esisha esebenza kahle ne-software ye-Huawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5300 ifaka amandla amakhulu kanye ne-gigabit interface yokuqina okukhulu, ihlinzeka ngama-10G uplinks, ahlangabezana nezidingo zamakhasimende zamadivayisi we-1G ne-10G uplink we-high density. I-S5300 ingahlangabezana nezidingo zezimo eziningi ezifana nokuhlangana kwensizakalo kumanethiwekhi we-campus nama-intranethi, ukufinyelela ku-IDC ngezinga le-1000 Mbit / s, nokufinyelela kumakhompyutha ngesilinganiso esingu-1000 Mbit / s kuma-intranethi. I-S5300 iyinsimbi emise okwe-chassis engu-1 U ephakeme. Uchungechunge lwe-S5300 luhlukaniswa ngamamodeli we-SI (ejwayelekile) ne-EI (athuthukisiwe). I-S5300 yenguqulo ye-SI isekela imisebenzi ye-Layer 2 nemisebenzi eyisisekelo ye-Layer 3, futhi i-S5300 yenguqulo ye-EI isekela izivumelwano eziyinkimbinkimbi zomzila kanye nezici zesevisi ecebile. Amamodeli we-S5300 aqukethe i-S5324TP-SI, S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352C-SI, S5352C-EI, S5324TP- PWR-SI, S5328C-PWR -PWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, kanye ne-S5352C-PWR-EI.
S3700 Series Enterprise Ishintsha
Ngokushintshwa kwe-Fast Ethernet ngaphezulu kwethusi elisontekile, iHuawei's S3700 Series ihlanganisa ukuthembeka okuqinisekisiwe nemizila eqinile, ukuphepha, nezici zokuphatha ngokushintsha okuhlangene, nokonga amandla.
Ukuthunyelwa kwe-VLAN eguquguqukayo, amandla we-PoE, imisebenzi ebanzi yomzila, namandla okuthuthela kwinethiwekhi ye-IPv6 ukusiza amakhasimende ebhizinisi akha amanethiwekhi we-IT wesizukulwane esilandelayo.
Khetha amamodeli we-Standard (SI) we-L2 nokushintsha okuyisisekelo kwe-L3; Amamodeli we-Enhanced (EI) asekela i-IP multicasting kanye nezivumelwano eziyinkimbinkimbi zomzila (OSPF, IS-IS, BGP).
S2700 Series Ishintsha
I-S2700 Series Switches inikela ngesivinini esisebenza ngamandla futhi esonga amandla, inikezela ngesivinini se-Fast Ethernet 100 Mbit / s yamanethiwekhi ekhampasi yamabhizinisi. Ukuhlanganisa ubuchwepheshe bokushintsha obusezingeni eliphakeme, isoftware yeHuawei's Versatile Routing Platform (VRP), kanye nezici zokuphepha ezakhelwe ngaphakathi, lolu chungechunge lukufanelekile ukwakha nokwandisa amanethiwekhi we-Information Technology (IT) azimisele ukwenziwa esikhathini esizayo.
Isixazululo se-5G Fronthaul Passive WDM
Isixazululo se-5G Fronthaul Semi-Active WDM
Icala le-WDM leFoshan City liya eziFundeni
1.1. Yakha uhlelo olusha lwe-40-wave DWDM ngesilinganiso esisodwa sesiteshi se-10Gbps
1.2. Ukusekela ukuvikelwa kokushintshwa okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo okungu-1 + 1
AbakwaHUANET bebehambele umbukiso weNETCOM
Kusukela ngo-Agasti 25 kuya ku-27, 2017, iNETCOM 2017 ibibanjelwe e-Expo Centre Norte, eSao Paulo, eBrazil. I-HUANET ihlanganise amasethi amabili wezixazululo zohlelo nemikhiqizo evela ku-FTTH ne-WDM, ekhombise ngokuphelele amandla we-HUANET emakethe yaseBrazil.
AbakwaHUANET bebehambele umbukiso i-CommunicAsia Exhibition
Kusukela ngoMeyi 23 kuya ku-25, 2017, i-CommunicAsia 2017 ibibanjelwe eMarina Bay Sands Singapore I-HUANET ihlanganise amasethi amabili ezixazululo zohlelo nemikhiqizo evela ku-FTTH ne-WDM, ekhombise ngokuphelele amandla we-HUANET emakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia.
I-HUANET ihambele Umbukiso weConvergence India
Kusukela ngoFebhuwari 8 kuya ku-10, 2017, iConvergence India 2017 ibibanjelwe ePragati Maidan, eNew Delhi, eNdiya. I-HUANET ihlanganise amasethi amabili wezixazululo zohlelo nemikhiqizo evela ku-FTTH ne-WDM, ekhombise ngokuphelele amandla we-HUANET emakethe ye-Middle East.
IHuawei Qsfp +, I-Xfp Transceiver, Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Sfp C ++, Optical Fibre Module, Intengo ye-Huawei Olt,